Ogaden News Agency (ONA) – Doorashadii guddiga jaaliyad Ogadenia faraca Gauteng ee Koonfur Afrika oo guul ku dhamaaday
Doorashadii guddiga jaaliyad Ogadenia faraca Gauteng ee Koonfur Afrika oo guul ku dhamaaday
Posted by ONA Admin	/ April 10, 2011
Shir lagu dhisyay guddiga jaaliyadda ee gobolka Gauteng ayaa wuxuu dhacay 25/03/2011 2dii duhurnimo shirkaasoo uu soo qabanqaabiyay gidigii gobolka Gauteng.
Waxaa shirgudoon ka ahaa oo daadihinayay gudoomiyii GB. mudane Maxamed Dahir Colhaye oo si mugleh uga war bixiyay wax qabadkii faraca ee sandkii ina dhaafay. Wuxuu sidoo kale mudane Maxamed D. Colhaye uu war bixindheer ka jeediyay shirka ku saabsan heerka uu marayo halganka gobanimadoonka iyo xaaladaha wadankii ka jirta iyo tabaha cusub ee gumaysiga. .waxaa kaloo uu gudomiyaha xusay abaaraha kajira wadanka Ogadenia iyo cunaqabataynta saran dalka taasoo uu ku tilmaamay inay tahay arin uu gumaysiga ula jeedo inuu kaga aargoosto shacabka.
waxaa kaloo codbaahiyaha lagu soo dhaweeyay N/hure C/rashid Giileeye oo isagana war bixino koob koban ka bixiyay jaaliyad iyo waxqabadkeeda iyo
guud ahan wadankii.
Waxaa warbixinadii ka dib xilkii wareejiyay gudigii jaaliyadaa horey u soo hogaminayay iyadoo mid waliba uu ka warbixiyay wax qabadkii haayadiisa ama hogaankii uu wakiilka ka ahaa.
Intaa ka dib ayaa waxa laga doortay xubnaha shirkagudi farsamo oo soo xula gudigii hogaamin lahaa faraca. Waxaa gudomiyaha guddiga doorashada loo doortay mudane Axmed Daahir Haruun iyo 4 xubnood oo kale.
Gudiga farsamad ayaa waxy soo hordhigeen shirwaynihii 6dii xubnood ee noqon lahaa guddiga sanadka soo socda hogaminaya faraca Gauteng .. dood dheer kadib ayaa waxa ladoortay guddigii hogaamin lahaa faraca gobolka Gauteng,
oo loo doortay xubnaha kala ah;
halgame Mukhtaar Cali Gurxan
halgame C/rashiid sheekh Cabdi
halgame Axmed Naasir (sinji)
halgame C/rashiid giileeye
halgame Huud sheekh badri
halgame sheekh Faysal Cismaan
shirka ayaa waxa hadlo kooban kasoo jeediyay gudoomiyha cusub ee faraca Gauteng mudane Mukhtaar Cali Gurxan. Sida oo kale waxa shirka khudbado wacyi galin ah kasoo jeediyay mudane C/raxmaan Xeef Khaliif oo xubnaha kula dardarmay in gudiga la doortay ay ula shaqeeyaan sida ugu firfircoon. Halgame Axmed Daahir Haarun ayaa isna kula dardaarmay gudiga la doortay iyo xubnaba inay mujiyan wadashaqayn wanagsan iyo shaqada kor loo sii qaado lana tayeeyo lagana hortago tabah cusub ee gumaysiga uu adeegsanayao.
waxa sidoo kale khudbad gaaban ka jeediyay goobta mudane C/rashiid(goljano) oo xubnaha ka codsady inay Ilahay u baryaan in xilka loo doorty uu Ilaahay ku asturo.
Shirkan oo bilowday abaarihii 2:00 duhirnimo ayaa wuxuu dhamaaday 7.00 fiidnimo isagoo ku soo dhamaaday guul iyo waji farxadeed.
halgamayaashii shaqada soo wadey mudadii la soo dhaafay, alla ha idinka abaalmariyo hadana waad sii wadaan dabcan, halgamayaasha hada loo xil-saaray shaqada halganka idinkana alla ha idiin fududeeyo dadaadla guusha waa la gaadhey